Xabi Alonso oo doortay shaxdiisa shanta xiddig… (Zidane & Ronaldo oo hoggaaminaya) – Gool FM
Xabi Alonso oo doortay shaxdiisa shanta xiddig… (Zidane & Ronaldo oo hoggaaminaya)
(Spain) 29 Abriil 2021. Halyeyga kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Real Madrid ee Xabi Alonso ayaa soo xushay kooxdiisa riyada ee ka kooban shanta xiddig, waxaana uu soo doortay halyeeyo waaweyn oo uu qaarkood garoonka la soo wadaagay.
Alonso oo sidoo kale khadka dhexe uga soo ciyaaray xulka qaranka Spain ayaa kasoo garab ciyaaray qaar ka mid ah xiddigaha ugu maqaamka sarreeya kubadda cagta, waxaana xiddigii ay Reds ka wada tirsanaayeen ee Jamie Carragher uu weydiiyay inuu macallinka Real Sociedad B soo xusho kooxdiisa riyada ee shanta xiddig ka kooban.
Isagoo la hadlayay barnaamijka uu daadihiyo Carragher ee lagu magacaabo ee Greatest Game, Alonso ayaa soo xushay goolhaye, daafac, laba xiddig oo khadka dhexe ka ciyaara iyo weeraryahan.
Xiddigaha shanta ah ee uu Alonso soo xushay waa ku jira laba ciyaaryahan oo uu ka soo garab ciyaaray iyo saddex xiddig oo ay maaliyadda Madrid waqtiyo kala duwan soo xirteen.
Haddaba kooxda shanta xiddig ee uu laacibkii hore ee Bayern Munich soo xushay waxa uu goolhaye kaga dhigay Manuel Neuer oo ay Bavarians ka wada tirsanaayeen waayihiisii ugu dambeeyay ee ciyaaryahannimo.
39-jirka macallinka u ah kooxda yaryar ee La Real ayaa Sergio Ramos usoo xushay booska daafaca, isagoo ku saaxiib ay waqtiyo fara badan kusoo wada qaateen xulka qaranka Spain iyo naadiga Real Madrid.
Khadka dhexe ayuu ku mataaneysiiyay Zinedine Zidane oo haldoor u ahaa kooxaha Real Madrid iyo Juventus, si la mid ah qaranka Faransiiskam, iyo halyeyga geeriyooda bishii November ee Diego Maradona, waxaana Alonso uu tilmaamay inuu Zidane saameyn shaqsi ah ku lahaa, halka aabbihiisna uu taageere weyn u ahaa halyeygii hore ee Argentina.
Burburiyihii hore ee Liverpool ayaa shaxdiisa ku dhammeystiray weeraryahankii hore ee xulka qaranka Brazil, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid iyo AC Milan ee Ronaldo Nazario.
Isku soo wada duub e, waxaa xusid mudan in shanta halyey ee uu usoo xushay Xabi Alonso ay dhammaantood xulalkooda kula soo guuleysteen Koobka Adduunka.
KABTANKA WAA UU SOO LAABTAY! Sergio Ramos oo ciyaari doona kulanka Chelsea